I Tre Abeti Gipsy Home, Cinque Terre & Relax - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPatrizia & Claudio
UPatrizia & Claudio ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Ikhaya leGipsy (okanye iCarrozzone Gitano) yindlu encinci eyakhiwe ngesandla ngamaplanga, ixhotyiswe ngayo yonke intuthuzelo ebalulekileyo. Ukuntywiliselwa kuhlaza lwesakhiwo sethu sabucala kunye nedama lokuqubha kunye nebarbecue, uya kuhlala kwindawo ye-surreal apho ukuphumla kuya kusebenza njengomongame. Uya kuba nekhitshi elinesitovu kunye nefriji, ibhedi enkulu emangalisayo kunye negumbi lokuhlambela elineshawa ebanzi kakhulu. Kuya kubakho i-TV ye-LED kunye ne-air conditioning.
Ikhaya lethu leGipsy lelinye lohlobo, zonke iinkcukacha zangaphakathi kunye nezangaphandle zenziwe imodeli ngesandla ukulinganisa. Sithathele ingqalelo zonke iinkcukacha ukwenza ukuhlala kwakho kube kukhethekileyo kwaye awuzukuphoxeka!
Indawo ithule kakhulu, nje imizuzu eyi-10 ukusuka kwiSikhululo esiPhakathi saseLa Spezia, iziko le-nerve lokutyelela iCinque Terre.
Kuphela yimizuzu engama-35 ngemoto eya kukwahlula kwiPortovenere entle kunye nemizuzu engama-25 ukusuka kwinqaba yembali yaseLerici.
Umbuki zindwendwe ngu- Patrizia & Claudio
Ikhaya leGipsy lingaphakathi kwigadi yabucala eya kuba sendleni yakho ukonwabela indawo yokuqubha kunye nebarbecue. Siya kuhlala sikhona ukuze sikuqinisekise ukuba uyathuthuzela kwaye sikunika lonke ulwazi oludingayo. Indawo yokupaka ibucala, isimahla kwaye iqinisekisiwe.
Izilwanyana zamkelekile ukuba azizange zishiywe zodwa kwisakhiwo kwaye zisetyenziselwa umhlaba egadini. Nawuphi na umonakalo owenziwe ngaphakathi kweKharavani uya kuhlolwa xa uphuma.
Ikhaya leGipsy lingaphakathi kwigadi yabucala eya kuba sendleni yakho ukonwabela indawo yokuqubha kunye nebarbecue. Siya kuhlala sikhona ukuze sikuqinisekise ukuba uyathuthuzela kw…
Inombolo yomthetho: Codice CITR: 011031-BEB-0001
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Piano di Valeriano-bottagna